Guddiga Qaban Qaabada Xuska 18-ka May Ee Minneapolis and St-Paul, Minnesota Iyo Hareeraheeda Oo Fariimo Muhiin Ah U Diray Jaaliyadda Halkaas Ee Somaliland
Monday April 10, 2017 - 15:58:55 in Maqaallo by Mr.Kalshaale Media
Guddiga Qaban Qaabada Xuska 18-ka May Ee Minneapolis and St-Paul, Minnesota Iyo Hareeraheeda Oo Fariimo Muhiin Ah U Diray Jaaliyadda Halkaas Ee Somaliland.
Guddiga Gacanta ku haysa u diyaar garawga munaasibada 18-ka May ee ku beegan sanad guurada 26aad ee ka soo wareegtay dib ula soo noqoshada madax banaanida Somaliland ee lagu qabanaayo magaalo madaxda Minneapolis ayaa fariin u diraaya jaaliyada Somaliland ee ku dhaqan Minneapolis, Sant Paul iyo hareeraheeda.
Guddida ayaa jaaliyadda ka war galisay wakhtiga la qabanaayo munaasibada loogu dabaal dagayo 18-ka May. Ku was oo sheegay in xalfada laqabanaayo 20-ka bisha May oo ku began maalin Sabtida ah. Xalfaddaas dabaal dageed oo adduunka lagu tusaayo madaxbananidta Somaliland ayaa noqonaysa xalfadii ugu balaadhnayd ee ka dhacda gobolka Minnesotam magaalooyinka loo yaqaan, Twin Cities.
Sanadka waxaan nasiib u yeeshiin in ay farxadaaa munaasibada la qaataan fanaankii caanka ahaaye, NUUR JAMA ADAN_NUURDAALACAY, iyo fanaaniinta reer Minneapolis oo aan cidi ka maqnay.
Sidoo Kale xubnaha guddida ahi waxay ku war geliyeen jaaliyada in lacagta ka soo xaroota munaasibadan qaar loogu deeqi dadka ku dhaqan Somaliland ee ay abaarta xuni hayso. Waxaanay Jaaliyada kula dardaarmeen inay ka soo qaby galaan si taakulada abaarta loogu helo dhaale badan.
Gudiga Somaliland Community of Minnesota.